सौर प्रकाश प्रणाली | best-solar-panels.com
घर >उत्पादनहरु >सौर प्रकाश व्यवस्था
Longchi प्रौद्योगिकी एक अग्रणी चीन सौर प्रकाश प्रणाली, सौर घर प्रकाश व्यवस्था, आउटडोर सौर प्रकाश व्यवस्था प्रणाली, सौर शक्ति प्रकाश व्यवस्था प्रणाली, सौर पैनल नेतृत्व प्रकाश व्यवस्था निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताओं को नेतृत्व मा एक छ, हाम्रो छूट र सस्ते सौर प्रणाली प्रकाश या थोक कम मूल्य को खरीद को स्वागत छ हाम्रो कारखानाबाट चीनमा सौर प्रणाली प्रकाश बनाइयो।
सौर प्रणाली जानकारी
बिजुली पावर प्रणाली
बन्द ग्रिड सौर बिजुली प्रणाली
मेरो सौर प्रणाली
सौर शक्ति प्रणाली
आर.वी. सौर प्रणाली
सूर्य शक्ति प्यानलहरू
सानो घर किट
ग्रिड सौर प्रणाली बन्द
सौर प्रणाली आरेख
घरहरूको लागि सौर प्यानलहरू
सौर प्रणाली परियोजना
सौर प्रणाली आइकन
सौर प्रकाश प्रणाली सौर ऊर्जा को उपयोग गरेर सौर ऊर्जा को उपयोग गर्दछ जुन सौर ऊर्जा (सूर्यलाइट) लाई सीधी बिजुली को रूप मा परिवर्तित गर्दछ, बिजुली बैटरियों मा संग्रहीत गरिन्छ र जब आवश्यक हो प्रकाश को उद्देश्य को लागि प्रयोग गरिन्छ।
आउटडोर सौर प्रकाश व्यवस्था
यो सुन्दरता दरवाजे देखि प्रकाश व्यवस्था को व्यवस्था को लम्ची ले तपाईंलाई सक्षम बनाता छ कि तपाईंलाई सजिलै संग तपाईंको निर्माण, यार्ड, या तम्बू को रूप मा, जंगली भित्र को निवास मा। किट2जंक्शन रिसेप्टर लाइट-बल्ब बल्ब सँग एक उच्च गुणस्तर कक्ष सँग आउँछ। प्रत्येक लाइट वजन बल्ब उनीहरूको म्यानुअल स्विचको कारण व्यक्तिगत आधारमा खोल्दछ र बन्द हुन्छ। प्रत्येक रोशनी सजिलै सौर सरणीसँग जोडिएको छ जसको माध्यमबाट संलग्न USB केबलको माध्यमबाट। यसले तपाईंलाई छाया भित्रको हल्का वजन बल्बलाई सम्हाल्न सक्षम पार्छ वा शायद छतको छेउमा छ भने तपाईंको सेल प्रत्यक्ष डेलाइटमा पाइन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईं रस को बाहिर चलिरहेको सन्दर्भमा चिन्ता गर्नु पर्दछ कि एक पटक तपाईको यार्ड, पोर्च, वा तम्बूलाई अझ रोचक बनाउन। जहाँ तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ भने, ढोकाबाट बाहिर यो तपाईको पक्षमा तारा प्रकाश व्यवस्था प्रणाली, तपाईं सधैँ तपाईंको वरिपरिको उज्ज्वल गर्न तयार हुनुहुनेछ।
हाम्रो दरवाजे स्टार प्रकाश व्यवस्था विकल्पहरु मध्ये एक 1W जंक्शन रिसेप्टर बल्ब र एक 2W एलईडी बल्ब जसले एक चमकदार रोशनी को दो सौ lumens को उत्पादन गर्दछ। उच्च अन्त सेलले यो प्रकाश व्यवस्था प्रणालीको विशाल 5000mAh ब्याट्री पूर्ण रूपमा चार देखि6घण्टासम्म लिन्छ। पूर्ण चार्जमा, तपाईंलाई पर्याप्त रस भन्दा बढी व्यवहार गरिने छ जुन तपाईंलाई लामो समय सम्म रातको समयमा आग्रह गर्दछ। यो नर्सिंग जुनेशन रिटिफायर ब्याट्री पावर सूचकमा एसोसिएट संग आउँछ जुन तपाइँले तपाइँको रोशनीको खण्डमा जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। यसका कारण, तपाईं अनपेक्षित रूपमा एक पटक थप शक्तिबाट भाग्न सक्नुहुन्न। यसको सीधा प्लग र प्ले शैली प्रयोग गर्नका लागि, हाम्रो ढोका स्टार प्रकाश प्रणालीबाट बाहिर निस्कन्छ र त्यहाँ कसैलाई प्रयोग गरेर मात्र प्रयोग गरिन्छ।
लामो समयदेखि वास्तवमा ढोकाको तारा प्रकाश व्यवस्था प्रणाली बहुमुखी सुविधा हो जुन कुनै पनि बाह्य अवस्थामा रोजगारी गरिनेछ। एक बाहिर पार्टीको लागि तपाईंको यार्डलाई रोचक बनाउनुहोस्, निर्माणमा किताब ब्राउज गर्नुहोस् वा तपाईंको वरिपरि उजागर गर्नुहोस्, जबकि जंगली बासिन्दाको वासस्थान वा माछा। यसको बलियो अर्धचालक निकाय र पनरोक शैलीको कारणले गर्दा, हाम्रो ढोका स्टार प्रकाश व्यवस्थाको बाहिर प्रयोग गरिन्छ जहाँ तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ। आफ्नो पहलू मा यो सुविधाजनक सुविधा संग, तपाईं एक पल्ट अँध्यारो को भित्र नैनो नहीं रहेंगे।
यो दरवाजाबाट तारा प्रकाश व्यवस्था तपाईं SUAOKI द्वारा, तपाईंको अनलाइन लाइन प्रदायक दरवाजा गियर र मोटर वाहन ग्याजेटहरू बाहिर उचित उच्च गुणस्तरको द्वारा छोडियो। अधिक पावर, कम फन्टप्रिन्ट!
अफ-ग्रिड सौर प्रकाश प्रणाली
अफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था प्रणाली गैर-बिजुली ग्रामीण क्षेत्रहरूको लागि प्रयोग भएको छ, घरहरूमा आपातकालीन प्रकाश व्यवस्थाको रूपमा र व्यावसायिक प्रतिष्ठान।
ग्रिड वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरू अफ स्ट्यान्डलोन वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीको रूपमा उल्लेख गरिन्छ। यी प्रणालीहरू कुनै पनि विद्युत उपयोगिता ग्रिडको पूर्ण रूपमा फ्रीलान्स हुन्।
धेरैजसो यसको प्रयोग ग्रामीण इलाकामा जहाँ पनि ग्रिड बिजुली छैन वा विभिन्न कारण बिजुलीको उच्च मूल्य हुनेछ। यस्तो क्षेत्रमा, वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीमा राखेर आफ्नो ऊर्जा को आपूर्ति गर्न उत्तम छ।
ग्रिड वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरू बन्द छन् गृह उपकरणहरूद्वारा सौर ऊर्जा प्रयोग गर्न सङ्कलन र भण्डार गर्न। यी प्रणालीहरू कहिलेकाहीँ सय सय वाटहरू (धेरै सानो प्रणालीहरू) बाट पाँच किलोवाटहरू (ठूलो प्रणालीहरू, बहु-पारिवारिक घरहरू) उत्पन्न गर्छन्।
ग्रिड वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरू बन्द गर्नुहोस् वा बिभिन्न शब्दहरूमा ग्रिड स्टार किटहरू बन्द गर्नुहोस्, उपयोगिता कम्पनीसँग जोडिएको जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले ग्रिडलाई फिर्ता लिन वा फिड गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूले यो योजना द्वारा बनाईएको ऊर्जालाई ब्याट्री बैंकमा राख्छ। प्रणालीमा तारा इलेक्ट्रिक घटना प्यानलहरू समावेश छन् जुन बिजुली कनवर्टरसँग जोडिएको छ। एक विद्युत घटना प्यानल आफ्नो प्रणाली द्वारा ऊर्जा उत्पन्न गर्दछ, जुन बिजुली उपयोग को पेशकश मा कुनै पनि उपकरण जो बैटरी भंडारण संग जोडिएको छ को उपयोग मा हुन सक्छ।
500W देखि 20kW सम्म धेरै आकार मा उपलब्ध छ
इन्वर्टर र चार्ज नियन्त्रक सबै भित्र
एकीकृत ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली र श्रम मोड फैलिएको छ
आवृत्ति अलगाव विद्युत उपकरण शैली, सुरक्षित, शान्त र स्थिर
110V / 230V अनावश्यक, 50Hz / 60Hz मिलाउने
द्वारा पास वा बिजुली वा डीजल जेनरेटर
VRLA-GEL ब्याट्रि, लामो गहिरो चक्र जीवन
बाहिरी ब्याटरिहरु, बहुमुखी विन्यास
सजिलो स्थापना, सुविधाजनक अपरेशन
छिटो र सही डिलीवरी, एक चोटि बढी पर्खनुहोस्
नि: शुल्क पूर्व-बिक्री टेक्निकल समर्थन, अनुकूलन सहित
पूरै तारा किटका लागि एक-पछाडि बिक्री-बिक्री सेवा
इनडोर सौर प्रकाश व्यवस्था प्रणाली
Longchi इनडोर प्रकाश व्यवस्था को बहिष्कार को विकल्प प्रदान गर्दछ। हामी3पुरा तरिकाले फरक आधार प्रणाली प्रदान गर्दछौं, र धेरै फरक प्रकारका प्रणालीहरू र प्रणालीका साथ प्रयोग गरिने रोशनीका शैलीहरू। ओठ-ग्रिड घरहरू, केबिनहरू वा विभिन्न भवनहरूको लागि राम्रो। तिनीहरूका लागि राम्रो "हरी" यात्रा गर्न चाहान्छु वा इनडोर प्रकाश को लागी पर्यावरण अनुकूल अनुकूल रिजोल्युसनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। तिनीहरू संयोजक एक ब्याकअप अप प्रकाश-आउटजर्जन वा आपात स्थितिमा प्रकाशको आपूर्ति हुन्। हामीले निर्णय लिनको लागि धेरै इनडोर लैंप र फिक्स्चरहरू पाएका छौं। सबैले केवल3इनडोर प्रकाश व्यवस्थामा प्रत्येकबाट मात्र जडान गर्न सक्दछ जुन हामीले प्रदान गर्दछौं।
सौर प्रकाश व्यवस्था कसरी स्थापित गर्ने
यस प्रशिक्षकले तपाईंलाई राम्ररी स्मार्ट आकारको बिजुली सौर ब्याट्री प्रणालीको साथ सबै ठाँउमा देखाउन सक्दछ। तपाईलाई आवश्यक हुन सक्दछ:
2 AWG केबल
कम्तीमा एक बाह्र भिसाको गहिरो चक्र ब्याट्री
1 पावर बिजुली कनवर्टर
1 टाइट वा वैकल्पिक उपकरण
रातो बिजुली टेप
इकट्ठा गर्छ र सुरू गर्न दिन्छ।
चरण 1: ब्याट्रीहरू तयार हुन।
तपाईलाई पहिलो प्रयास गर्न चाहानु भएको पहिलो मुद्दा चार्जरसँग ब्याट्री चार्ज गर्दछ। यसले बीमा गर्न सक्ने क्षमतालाई शुल्क लगाउन सकिन्छ र स्थापनामा यात्रा गर्न तयार छ। मैले मेरो ब्याटरी नयाँ किने र केवल sixtieth को बारेमा मात्र थिए।
ब्याट्रिहरू चार्ज गर्दै छन्, तपाईंले तारा प्यानलहरू स्थापना गर्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई तारिख गर्ने र यात्रामा तयार पार्नुहुनेछ।
चरण 2: उपकरणमा ब्याटरिहरु उपकरण।
एकपटक ब्याट्रिहरू पूर्णतया शुल्क लगाइदिन्छ, तिनीहरूलाई उपकरण भित्र राख्नुहोस् र। सबै सकारात्मक (+) टर्मिनलहरू एक पक्षमा र नकारात्मक हुन्छन् सुनिश्चित गर्नुहोस् (-) विपरीत। एक पल्ट सुत्न मा, टर्मिनल देखि टर्मिनल सम्म jumpers बनाउन को लागि।
चरण 3: Jumpers बनाउनुहोस्।
अर्को, हामी समानांतरमा ब्याट्रीहरू संलग्न गर्न चाहन्छौं। यो गर्नका लागी, केही उडानहरू दुई AWG केबलको निर्माण गर्नुहोस्।
नोट: तपाईंको प्रणालीको लागि आफ्नो जम्पर्स आकार गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईं ठूलो बिजुली कनवर्टर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ठूलो केबल प्रयोग गर्नुपर्दछ। 1200 वाट्स / 12 वोल्ट = एक सय एम्प्स। जहाँ पनि तपाईलाई हेर्नुहुन्छ, AWG को जोडी जो सयौं एम्प्सको लागि मीठो छ। यदि तपाइँ चालु गर्न चाहानुहुन्छ भने, एक 2400 वाट बिजुली कनवर्टर, तपाईले प्रत्येक जम्परलाई एक जोडा केबलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।
टर्मिनल र लम्बाई केबलको बीचमा माप गर्नुहोस्। त्यसपछि मेकेनिकल लसहरू थप्नुहोस्। चूंकि ब्याट्री टर्मिनलहरूले लगी भित्र प्वाल भन्दा ठुलो ठुलो हुन्थे मैले मैले काममा इरादा प्रशिक्षित गरे।
चरण 4: ढक्कन तयार हुन
अब, ढक्कन भित्र केहि प्वालहरू थप गर्नुहोस् प्रवाह नियन्त्रक को लागि तारहरू चलाउन र यसैले विद्युत कनवर्टर। मलाई बाहिर चार्ज नियन्त्रक चाहिन्छ यो जस्तो देखिने छ। तपाईं सजिलै छुट्टै लुगा लगाउने को लागी साधन भित्र राख्न सक्नुहुन्छ।
चरण 5: चार्ज नियन्त्रक र ब्याटरियर्समा विद्युतीय कनवर्टर जडान गर्दै।
अर्को हामी चार्ज नियन्त्रकसँग जोड्दछौं र यसकारण ब्याटरनेटमा विद्युतीय कनवर्टर। तपाईं सकारात्मक सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ कि बिजुली कनवर्टर बन्द गरिएको छ र त्यसैले शुल्क नियन्त्रकलाई तारा प्यानलसँग जोडिएको छैन।
चरण 6: अन्तिम स्थापना र जाँच गर्नुहोस्।
यो सबै साथ वायर्ड हुनु पर्छ। बायाँ सबै बायाँ तारा प्यानलमा चार्ज नियन्त्रक संलग्न गर्न र इलेक्ट्रोइन्ड कनवर्टर स्विच गर्न र यसले काम गर्दछ भनेर काम गर्न जाँच गर्नुहोस्।
चरण 7: केहि अन्तिम विचार।
मैले मूल रूपमा यो स्थापनाको लागि डुप्लिकेट पावर सप्लाईको रूपमा स्थापित गरेको हो। तर, म महसुस गर्छु म यसको तुलनामा धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गर्नेछु। मलाई मान्दैन कि तारा प्यानलहरू पर्याप्त शक्तिशाली छन् जुन दैनिक आधारमा ब्याटेर ब्याट्रीहरू चार्ज गर्छन्। म केहि दिनको लागि प्रयोग गर्नेछु र तथापि राम्रो तरिकाले प्रणाली निरन्तर उपयोगको साथ अद्यावधिक गर्दछु।
मैले मूल रूपमा एक ब्याट्रीको परीक्षण गरेँ र अन्ततः बन्द गरिसकेपछि पाँच घण्टाको बारेमा लम्ब र मेरो ल्याप्टप कम्प्यूटर चलाउन सक्षम थियो। यस बिजुली कनवर्टरको बारेमा ठूलो मुद्दा यो हो कि यो मेकानिकल बन्द हुनेछ यदि भोल्टेजले ब्याट्रीहरू रोक्न निकै कम हुन्छ। म धेरै आश्वस्त छु कि3बैटरिहरु संग म आफ्नो समय को विस्तारित राशि को लागि ठूलो कुराहरु लाई बिजुली मा सक्षम हुनेछ।
Longchi सौर प्रकाश प्रणाली को निर्माता (निर्माता / थोक व्यापारी) सप्लायर हो। मुख्य उत्पादन एसजीएस, सीई प्रमाणीकरण, ROHS रिपोर्ट को गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट को माध्यम ले र प्रासंगिक प्रमाणपत्र प्राप्त। गुणवत्ता उत्कृष्ट छ र मूल्य उत्कृष्ट छ। यो एकताबद्ध रूपमा चिनारीहरू को बहुमत द्वारा पहिचान र प्रशंसा गरिएको छ।